प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन : समानुपातिकमा कुन समुदायबाट कति प्रतिशत ? « Deshko News
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन : समानुपातिकमा कुन समुदायबाट कति प्रतिशत ?
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वैदेशिक सहायता नलिने भएको छ । विगतका निर्वाचनमा आयोगले विभिन्न दातृनिकाय, आइएनजिओ तथा छिमेकी मुलुकबाट सहायता सामग्री लिँदै आएको थियो ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नवराज ढकालले सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने भएकाले यसपटक वैदेशिक सहायता नलिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
आयोगले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनदेखि बिस्तारै वैदेशिक सहायता लिने क्रम घटाएको हो । आयोगले विगतमा भारतबाट गाडी, स्कुटी, चीनबाट छेकाबार, डटपेन, पन्चिङ मेसिन, मसीलगायतका निर्वाचन सामग्री सहायता लिने गरेको थियो ।
यसपटक आयोगले आवश्यक ती सबै सामग्री आफैँले खरिद गर्नेछ ।
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको संख्या थपिने जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १८ हजार मतदान केन्द्र थिए । त्यसमा १५ सयदेखि दुई हजार मतदान केन्द्र थप हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ४१ लाख मतदाता थिए । त्यसमा करिब १४ लाख मतदाता थपिएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब एक करोड ५५ लाख मतदाता हुनेछन् ।
समानुपातिकको ढाँचा तयार
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको मतपत्रको ढाँचा टुंगो लगाएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक मतपत्र एउटै प्रयोग गरिनेछ ।
समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्रको ढाँचाअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि देशैभरि एकै प्रकृति र प्रदेश सभाका लागि प्रदेशअनुसार दलको सहभागिताका आधारमा मतपत्र फरक हुने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रभावित गर्ने गतिविधि नगर्नुस् : आयोग
निर्वाचन आयोगले दलीय गठबन्धनले मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कुनै असर नपार्ने जनाएको छ । दलीय गठबन्धनका कारण निर्वाचन सर्ने हल्ला चलेपछि आयोगले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो । साथै, आयोगले निर्वाचन प्रभावित हुने गतिविधि र क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न पनि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात र मतपत्र छाप्ने काम भइरहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं, असार १२ गत वर्ष भन्दा करिब १ साता ढिला भित्रिएको मनसुन देशभर सक्रिय भएको
कम्तीमा ६ जना मन्त्री फेरिने, ओलीले क–कसलाई बोलाए बालुवाटार ?
काठमाण्डौँ, असार १२ सरकारमा रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हेरफेर हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा
एसईई परीक्षाको नतिजा आज आउँदै, दिउँसो बोर्ड बैठक
काठमाडौं, असार १२ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईईको नतिजा